सरकार किन पछि हट्यो ?
नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै सरकारले ढुवानीलाई केन्द्रीय ट्र्याकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्न भीसीटीएस लागू ग¥यो । तर निजी क्षेत्रले यसको विरोध ग¥यो र अन्ततः सरकार आफ्नो निर्णयबाट केही पछि हट्यो ।
सरकारले ‘भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’ व्यवसायीकै हितमा छ भने पनि व्यवसायीहरु किन विरोधमा आए त ?
वास्तवमा भीसीटीएस प्रणाली चोरी निकासी पैठारी तथा राजस्व छली नियन्त्रण गर्न निकै सहयोगी छ । यो प्रणालीमा सिस्टमबाट बिलबिजकको कपी बुझाउन पाइन्छ । आर्थिक कारोबार तथा ढुवानी भरपर्दो तथा पारदर्शी हुन सक्छ ।
यो नयाँ प्रणालीमा व्यापारीहरुले कर छल्न सहज छैन । यसले व्यावसायिक मालसामानको ढुवानीलाई वैध बनाउँछ, अवैध सामानलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । त्यसैले उनीहरू यसलाई खारेज गर्न लागिपरेका हुन् । राम्रो प्रणालीलाई नराम्रो भन्न नमिलेकाले नै इन्टरनेट नभएको, झन्झटिलो, पूर्वाधार अपुग जस्ता सानातिना समस्या देखाइरहेका छन् ।
सरकारले यो व्यवस्था एकाएक लागू गरेको हैन । वर्षौं अघिदेखि लागू गर्न आँटेको थियो । तर स्थिर सरकार नहुँदा यो अन्योलमा परेको थियो । प्रविधिको उपयोगमा नेपाल निकै पछाडि छ । यस्तोमा ढुवानी सेवालाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा ल्याउनु राम्रो शुरुआत हुन सक्थ्यो । तर, सरकारले सहजीकरण गर्ने भनेर यसमा केही लचकता देखाएको छ ।
नेपालको विकास हुन नसक्नुको एउटा कारण नै नियम कानुन र प्रणाली अनुसार काम नहुनु हो । त्यसलाई विभिन्न बहानामा रोक्ने वा छलछाम गर्ने गरिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति रहिरहे हामी दशकौं पछि परिरहने छौं ।